Dagaal sababay Khasare oo maanta ka dhacay Duleedka Muqdisho – SBC
Dagaal sababay Khasare oo maanta ka dhacay Duleedka Muqdisho
Dagaal sababay Khasaare Nafeed ayaa maanta waxa uu ku dhexmaray Deegaanka ex Kontarol Afgooye Ciidamada Dowlada KMG ah ee Soomaaliya iyo xoogaga Xarakada Aslahaab Almujaahidiin.
Dagaalkan ayaa yimid ka dib markii sida lagu soo waramayo ay ku durkeen ciidamada DKMG ah ee Ex Control Afgooye ku sugan deegaan ka agdhow oo ay fariisin ku leeyihiin xarakada mujaahidiinta Alshabaab.
Waxa uu dagaalkaasi soconayay mudo kooban waxaana la isku adeegsaday hubka noocyasiida kala duwan, waxaana inta la xaqiijiyay ku geeriyooday dagaalkaasi 4 qof halka uu jiro dhaawac intaasi ka badan, waxaase xusid mudan in dadka dhaawacmay iyo kuwa Geeriyoodayba ay ka tirsanyihiin labada dhinac ee dagaalamay.
Warar dheeraad ah oo ku saleysan waxyaabaha dhaliyay dagaalkan ayaa sheegaya in ciidamada DKMG ah oo dhaq dhaqaaq iyo Amaan adkeyn xoogleh ay wadeen ay u galeen goob ay fariisin ku leeyihiin xarakada mujaahidiinta Alshabaab ka dibna uu dagaalku qarxay.
Waxa uu imanayaa dagaalkan xili uu maanta Magaalada Muqdisho soogaaray raiisul wasaaraha Dalka Turkiga Rajab Dayib erdogan
war alle kabaqa oo xushmeeya bisha ramadan oo daaya dagaalka plz fadlan